တရုတ် ALRJ စီးရီး ဖုန်စုပ်စက် ရောစပ် Emulsifier ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |ညှိထားသည်။
ပင်မ emulsifying အိုး၊ ရေအိုး၊ ဆီအိုးနှင့် အလုပ်ဘောင်တို့ ပါဝင်သည်။
အများအားဖြင့် ဆီအိုးကို ဆီအဖြစ်သာပျော်ဝင်နိုင်သော အချို့အစိုင်အခဲအချို့ကို အရည်ပျော်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး၊ ထို့နောက်တွင် အဆိုပါပျော်ဝင်သည့်အရည်သည် ပျော့ပျောင်းသောပိုက်များဖြင့် emulsify အိုးထဲသို့ စုပ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။
ရေအိုး၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဆီအိုးနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
Emulsify Pot သည် ဆီအိုးနှင့် ရေအိုးများမှ စုပ်ထုတ်သည့် ထုတ်ကုန်များကို emulsify လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
လေဟာနယ် emulsifier သည် အင်ဂျင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော ဦးခေါင်း၏ မြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့် ပစ္စည်းများကို ကွဲအက်စေပြီး ကွဲထွက်ကာ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ဤနည်းအားဖြင့်၊ ပစ္စည်းသည် ပိုမိုသိမ်မွေ့လာပြီး ဆီနှင့်ရေ ပေါင်းစပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။နိယာမမှာ ဖုန်စုပ်သည့်အခြေအနေရှိ အဆင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အဆင့်များစွာကို အခြားစဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်သို့ လျင်မြန်စွာနှင့် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေရန်အတွက် high-shear emulsifier ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် stator နှင့် rotor အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို ကျဉ်းသွားစေရန် စက်မှယူဆောင်လာသော ပြင်းထန်သော အရွေ့စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည်။ကွာဟချက်တွင်၊ ၎င်းသည် တစ်မိနစ်လျှင် ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြတ်တောက်မှု ရာနှင့်ချီရှိသည်။centrifugal ညှစ်ခြင်း၊ ရိုက်ခတ်ခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်း စသည်တို့၏ ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် ချက်ချင်းဆိုသလို ကွဲထွက်သွားပြီး ညီညီစွာ emulsify လုပ်ပါသည်။ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော စက်ဘီးစီးမှု အပြန်အလှန်ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ပူဖောင်းများမပါသော အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး တည်ငြိမ်သော၊ နောက်ဆုံးတွင် ရရှိသည်။
လေဟာနယ် emulsifier တွင် အိုးကိုယ်ထည်၊ အိုးအဖုံးတစ်ခု၊ ခြေဖဝါး၊ လှော်တက်၊ နှိုးဆော်သည့် မော်တာ၊ နှိုးဆော်သည့် ပံ့ပိုးမှု၊ အစာကျွေးကိရိယာ၊ စွန့်ပစ်ပိုက်နှင့် ဖုန်စုပ်စက်တို့ ပါဝင်သည်။ထုတ်ကုန်အစာကျွေးသည့်ကိရိယာသည် အိုး၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီး ထုတ်ကုန်လေဟာနယ်ကိရိယာကို အထက်ဖော်ပြပါ အစာကျွေးကိရိယာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး အလိုအလျောက်စုပ်ထုတ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်။ယခင်အနုပညာလက်ရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လေဟာနယ် emulsifier သည် ဆိုင်းငံ့ထားသော အလင်းရောင်ကို အိုးထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို အညီအမျှ ရောနှောကာ အစာကျွေးခြင်း၏ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုကို သိရှိနိုင်သည်။
Vacuum Emulsifier ၏ ထုတ်ကုန် အားသာချက်များ
1. vacuum emulsifier ၏ ရောစပ်မှု အယူအဆသစ်သည် ထုတ်ကုန်၏ အရည်အသွေးကို သေချာစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကို တိုစေနိုင်သည်။
2. functional modules များ၏ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်း၊ လေဟာနယ် emulsifier တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
3. တစ်သားတည်းဖြစ်စေသောဦးခေါင်းသည် ပစ္စည်း၏ မတူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အညီ သင့်လျော်သော ဖြန့်ကျက်ခေါင်းကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။emulsification ပြီးနောက်၊ အမှုန်အရွယ်အစားသည် သေးငယ်ပြီး ကောင်းမွန်သည်၊ ထုတ်ကုန်သည် တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး ကြာရှည်စွာပင် တည်ငြိမ်နိုင်သည်။
4. အကြိုရောစပ်ထားသော ကန်ထဲတွင် ခရုပတ်မွှေစက်ပါရှိပြီး ဖုန်စုပ်စက်သည် တိုင်ကီအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို တည်ငြိမ်ပြီး အပြည့်ရောစပ်ကြောင်း သေချာစေနိုင်သည်။
5. ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက် လမ်းကြောင်းများတွင် ကောင်းစွာရောနှောပါ။
6. ခြစ်ရာသည် အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။Food vacuum emulsifier သည် ပြောင်းပြန်ဦးတည်ချက်ဖြင့် လှည့်နိုင်ပြီး အသေအဆုံးမရှိ၊ အပူနှင့် အအေးခံနိုင်ပြီး အချိန်ကို အလွန်တိုစေပါသည်။
7. ရောစပ်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် လိုအပ်ချက်အရ ချိန်ညှိနိုင်သည့် ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ် ထိတွေ့မျက်နှာပြင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို PLC ကို လက်ခံပါသည်။
မော်ဒယ် ထိရောက်သော စွမ်းဆောင်ရည် Emulsify လှုံ့ဆော်သူ အတိုင်းအတာများ စုစုပေါင်း ဓာတ်အား (kw)
KW r/မိနစ် KW r/မိနစ် အရှည် အကျယ် အလေးချိန် Max H
ALRJ-20 20 ၂.၂ ၀-၃၅၀၀ ၀.၃၇ ၀-၄၀ ၁၈၀၀ ၁၆၀၀ ၁၈၅၀ ၂၇၀၀ 5
ALRJ-50 503၀-၃၅၀၀ ၀.၇၅ ၀-၄၀ ၂၇၀၀ ၂၀၀၀ 2015 ခုနှစ် ၂၇၀၀ 7
ALRJ-100 ၁၀၀3၀-၃၅၀၀ ၁.၅ ၀-၄၀ ၂၁၂၀ ၂၁၂၀ ၂၂၀၀ ၃၀၀၀ 10
ALRJ-150 ၁၅၀4၀-၃၅၀၀ ၁.၅ ၀-၄၀ ၃၁၁၀ ၂၁၂၀ ၂၂၀၀ ၃၁၀၀ 11
ALRJ-200 ၂၀၀ ၅.၅ ၀-၃၅၀၀ ၁.၅ ၀-၄၀ ၃၁၅၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၃၁၀၀ 12
ALRJ-350 ၃၅၀ ၇.၅ ၀-၃၅၀၀ ၂.၂ ၀-၄၀ ၃၆၅၀ ၂၆၅၀ ၂၅၅၀ ၃၆၀၀ 17
ALRJ-500 ၅၀၀ ၇.၅ ၀-၃၅၀၀ ၂.၂ ၀-၄၀ ၃၉၇၀ ၂၈၀၀ ၂၇၀၀ ၃၉၅၀ 19
ALRJ-750 ၇၅၀ 11 ၀-၃၅၀၀4၀-၄၀ ၃၇၈၀ ၃၂၀၀ ၃၀၅၀ ၄၃၈၀ 24
ALRJ-1000 ၁၀၀၀ 15 ၀-၃၅၀၀4၀-၄၀ ၃၉၀၀ ၃၄၀၀ ၃၁၅၀ ၄၅၅၀ 29
ALRJ-1500 ၁၅၀၀ ၁၈.၅ ၀-၃၅၀၀ ၇.၅ ၀-၄၀ ၄၀၀၀ ၄၁၀၀ ၃၇၅၀ ၅၆၅၀ 42
ALRJ-2000 ၂၀၀၀ 22 ၀-၃၅၀၀ ၇.၅ ၀-၄၀ ၄၈၅၀ ၄၃၀၀ ၃၆၀၀ ဓာတ်လှေကားမရှိပါ။ 46
ယခင်- JFP-110A စီးရီး Vertical Capsule Polisher
နောက်တစ်ခု: ALTF Tube Filling နှင့် Sealing စက်
ဖုန်စုပ်စက် Emulsifier Mixer